‘Mitomania ianao ry taniko’ | GAZETY_ADALADALA
‘Mitomania ianao ry taniko’
Posted on 27/01/2009 by gazetyavylavitra
Talata mainty (Mardi Noir) ho anay mianakavy ny androany.
Ankoatra ny hilazako aminao izay nahazo anay androany dia ireto aloha sombintsombim-baovao samihafa. Mety tsy ho feno araka izay andrasanao, fa inoana kosa fa mba misy azo ihoriranana ihany.
Analakely : rehefa nirehitra ny magazay iray dia mbola nisy ihany ny nanao amboletra niditra, mba haka izay heveriny ‘ho anjarany’ tao. Be ny tavela tamin’ireny ka maherin’ny 20 no maty (tatitra avy amin’ny mpamonjy voina eny Tsaralalana)
Tulear : maherin’ny 20 koa ny maty sy naratra (mitambatra io isa io, araka ny Radio Antsiva)
Ambanja : 2 no maty nandritra ny fanafihana ny magazain-dRavalomanana
Sambava : 74 ny moto tokony ho an’ny Ben’ny tanàna nangalarin’ireo andian’olona manao ity asa fandrobana ity. Nangalarina ny zavatra natao ho fiandry voina tokony homena ireo tra-boina mandritry ny rivo-doza (BNGRC). Amina miliara ny fahasimbana tao amin’ny orisana TOYOTA RASSETA, ary tapaka ny jiro. Tetik’ireo manaraka ny hanafika ny sampan’ny JIRAMA any an-toerana. Ravan’izy ireo koa ny tsenan’ny Donia.
Antananarivo : Mirehitra ny SOAM (mpamokatra gaz fampiasa eny amin’ny hopitaly sy ny fanaovana soudure) etsy ambodivonkely Ambohimanarina.
Couvre-feu : Nivoaka ny didy fa manomboka anio 27/01/2009 dia tsy azo atao ny mivezivezy amin’ny alina eran’Antananarivo, amin’ny 9 ora (21h) hatramin’ny 04h maraina.
Amin’ny folo mahery ny andro, nanomboka nisy nitangorongorona teo anoloan’ny Supreme Center (efa vaky ny alina iny). Ary nitombo hatrany. Hay efa niandry ireo namany ho tonga sisa. Tampoka sy haingana be ny fandehan’ny raharaha nanomboka teo amin’ny 1 ora teo. Nirohotra niampita tampoka ireto andian-jatovo (toy ireny Jomaka ireny, miala tsiny fa tena izay no fahitako azy), dia tonga dia namaky ireo magazay tantanan’ny vahiny (Sinoa no betsaka) tsy lavitra teo. Eo andavarangan’ny birao izahay no mitazana izany rehetra izany. Mifindrafindra hatrany izy ireo rehefa vita ny magazay iray, ary toy izany hatrany. Rehefa vakiny ny varavarana dia miakatra ny horakoraka sy ny tehaka. Misy ny mpanome baiko, ary rehefa vita ny fandraofana entana, dia soniavina amin’ny afo hatrany ny ‘opération’ natao. (Soa fa tsy nahavita hatramin’ny farany ny tetika ratsiny ireo tolona ireto fa tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana. Niantso ny Radio Antsiva indray mantsy izahay tao ampiasana mba hiantso amin’ny onjam-peo ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana). Farany dia tonga tandrifin’ny vavahady miditra ato amin’ny birao. Efa nanomboka nisy nandoboka vy be ny vavahady, saingy nisy niteny tao anatin’ireto mpanafika fa hoe
‘Malagasy no ao’
, ary dia avotra aloha ny birao teto. Nandritra izany anefa dia efa tonga koa ny Gendarmes sy ny Polices, ary efa nanomboka nanao tifi-danitra. Raikitra ny ‘sakoroka’. Samy nitady izay handosirany avy ireo avy nangalatra sy naka ny tsy azy.
Fa izay tena nampalahelo sy nahatezitra ahy tamin’ireto ‘sauvages’ ireto, dia ny nidirany an-keriny tao an-tananako. Sendra maka sary eo an-davarangan’ny birao aho, no nitodika tampoka teny an-trano ny masoko ka nahatsikaritra andian’olona mihanika ny tamboho. Tsy iza ireo fa ireo avy nangalatra kidoro sy latabatra sns… tamin’ireo magazay teo anilan’ny birao ihany. Tsy nahatsindry intsony aho fa niady tamin’ny agents de sécurité mihitsy ny amin’ny hamelana ahy hivoaka ny vavahady vy, na hisy inona , na hisy inona. Vantany vao tafavoaka aho dia ny nanatona avy hatrany ireo Gendarmes mirongo basy no nataoko ary naka éléments tamin’izy ireo mba handeha no any an-trano hiaraka amiko.
Ndao mba hiaraka amiko. Vonjeo ny zanako fa izao mitomany anaty telephojne izao. Tafiditra ao an-tananako daholo ry zalahy avy nangalatra teto’
. Dia nahazo olona tokoa aho. Isaorako ireto mpitandro filamionana. Fa ankoatra ireo nentiko dia efa nisy koa nentin’ny mpiara-monina izany tena isaorako manokana tokoa sy tolorako fankasitrahana mitafotafo etoana. Lalàna samy hafa no nizoranay namonjy ny tranoko, ka izaho sy ireo niaraka tamiko dia avy any atsimo, raha avy any avaratra kosa ireo fokonolona. Tampina ny lalana azon’ireto andian’olona nivoahana, ka hany hery dia mbola saiky hihoatra ny tambohon’olona mifanila vodirindrina taminay indray. Efa nomena somation fa hoe tifirina rehefa tsy mitolo-tena, izay vao nitolo-batana. Aleo angamba dia ny zanako vavimatoa no hitantara azy amin’ny fomba niainany azy:
Novakiana indray androany ny magazay mpivarotra iray eto Ambatomitsangana Andravoahangy, tsy lavitra ny Suprême Center. Samy nibata izay azony avokoa ny « mpangalatra » rehetra. Fotoana fohy taorian’izay, raikitra koa ny fifampitifirana, ka be ny mpitsoaka nisaoty tamboho sy niezaka ny hiditra an-tananan’olona mba hiafina. Anisan’izany ny tanànanay. Teo amin’ny valo teo ho eo no tafiditra tao an-tokontany ka samy niezaka ny niafina araka izay azony natao daholo ry zareo. Soa ihany fa tsy nisy niezaka ny hamaky ny tranonay kosa! Soa ihany koa fa tonga haingana ny mpitandro ny filaminana ka naka azy ireo. Nihevitra ary izahay fa efa lasa daholo ry zareo. Kinanjo minitra vitsy taorian’ny nahalasànan’ny mpitandro ny filaminana sy ireo izay tratra dia iny fa nisy iray tsara fiafenana nijokojoko, tsy voatsikaritray akory, nivoaka avy tao amin’ilay elankelan-trano kely niafenan-dry zareo! (elankelan-trano manasaraka ny tranonay amin’ilay trano eo akaiky)
Ireto ny sarin’izy ireo, izay rehefa nisaiko dia feno FOLO be izao :
ireo mpandroba niditra an-keriny tao an-tananako
ireo mpandroba niditra tao an-tananako
ireo mpandroba niditra an-jeriny tao an-tananako
any amin’ny Youtube kosa ny bolongan-tsary momba izany
Nirefodrefotra ny basy tety, ary ny tena mahazendana dia tsy matahotra izany ireo mpandroba, fa vao mainka aza mihantsy ny mpitandro filaminana. Rehefa mirefotra ny basy, dia lasa aloha mitsoaka kely. Avy eo aza dia miverina indray ireto ‘brigands’ ireto ary sady mihaogahaoga, no mitoraka vato ihany koa hamely ireo gendarmes
Niverina nandeha ny onjam-peo VIVA androany maraina. Tsy mbola nisy aloha ilay fifampiresahana teo amin’i Andry Rajoelina sy Ravalomanana Marc hatreto. Andry Rajoelinan o tsy nety indray fa mbola hiverina eny amin’ny 13 mai rahampitso noho ny fitakiana sasany nangatahany mbola tsy mivaly. Etsy andanin’izay anefa dia mbola mitohy hatrany ny fahapotehan’ny firenena.
Ka iza no hivoaka ho ‘STAR’ amin’izao zavatra mitranga izao? Asa lahy????????? Fa mandra-piandry izany dia Mitomania ianao ry taniko
« Gidragidra (émeutes) ILAY MATY VOALOHANY »
simp, on 27/01/2009 at 11:57 said:
mitomania ianao ry taniko
ikalamako, on 28/01/2009 at 11:47 said:
olona tsy manana arovana ireny ry avylavitra – ils ont rien à perdre – izay no tsy atahorana basy mipoaka. Tsisy avenir eritreretina izy satria tsy manana fahaizana entina miatrika ny fiainana, tsy manana harena atahorana ho very sy ho lò, fiainana tsizarizary ny azy ary mahatsapa izy fa na iza na iza hitondra ity firenena ity dia io ihany ny fiainany ka mitovy aminy ny maty androany sy ny maty rahampitso fa ny manampatra ny frustration-ny aloha no mahamaika azy. Tsy mijery izy na iza na iza no hanamparany izy, indrisy mantsy, tsy afaka handinika izany izy. Tsy izy ireo no omeko tsiny fa izay NAMPIASA azy ireo ho VATOM-PANORONA.
Mahereza ary enga anie ho lasan’izay ilay ratsy.
Efa ela ny Taniko no nitomany, saingy izay tonga eo amin’ny fitondrana sy izay mba antenaina toa mainka koa manampy trotraka mampidradradradra, indrisy !